2014 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
လင်းလက်လွန်း at 11:13:00 PM 0
Maung Pauk at 6:38:00 PM 0
လင်းလက်လွန်း at 5:43:00 PM 0
Maung Pauk at 1:29:00 PM 0
ဝတ္ထုနဲ့ ရသစာပေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် ကြည်ဦး ရဲ့ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ် ပရလောကနယ် စာအုပ်ပါ.. Pdf အကြည်ဖြစ်ပါတယ်..
ဝတ်ထုနဲ့ ရသစာပေ ဖတျခငျြသူမြားအတှကျ ကွညျဦး ရဲ့ ထူးဆနျးအံ့ဖှယျ ပရလောကနယျ စာအုပျပါ.. Pdf အကွညျဖွဈပါတယျ..
ထူးဆန်းအံ့ဖွယ် ပရလောကနယ် ( ကြည်ဦး ).pdf : 5.46 Mb
ရသစာအုပ် Download Link
အတွေ့အကြုံအထူးအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ ( တစ္ဆေတကယ်ရှိမရှိ တတိယတွဲ) - ဒေါက်တာအောင်ကျော် (သွားဆရာဝန်)
Maung Pauk at 1:17:00 PM 0
ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဖတ်ချင်သူများအတွက် ဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအထူးအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ ( တစ္ဆေတကယ်ရှိမရှိ တတိယတွဲ) ဖြစ်ပါတယ်.. PDF အကြည်ဖြစ်ပါတယ်.. စာအုပ်ကို Scan ဖတ်ထားတာ မဟုတ်ပါ.. မူရင်းတင်ပေးသူ ချယ်ရီသစ္စာ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. သူ့လင့်ကတော့ ပျက်နေပါပြီ..
ဝတ်ထုဇာတျလမျးဖတျခငျြသူမြားအတှကျ ဒေါကျတာအောငျကြျောရဲ့ အတှအေ့ကွုံအထူးအဆနျး တစ်ဆဇောတျလမျးမြား ( တစ်ဆတေကယျရှိမရှိ တတိယတှဲ) ဖွဈပါတယျ.. PDF အကွညျဖွဈပါတယျ.. စာအုပျကို Scan ဖတျထားတာ မဟုတျပါ.. မူရငျးတငျပေးသူ ခယျြရီသစ်စာ ကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ.. သူ့လငျ့ကတော့ ပကျြနပေါပွီ..
အတွေ့အကြုံအထူးအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ ( တစ္ဆေတကယ်ရှိမရှိ တတိယတွဲ) - ဒေါက်တာအောင်ကျော် (သွားဆရာဝန်).pdf : 1.46 Mb
ရသစာအုပ် Download Links
Maung Pauk at 1:08:00 PM 0
မြန်မာဝတ္ထုဖတ်ချင်လို့ တောင်းဆိုတဲ့မိတ်ဆွေအတွက် ဆရာဒဂုံရွှေမျှားရဲ့ လူသစ်ပင် ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. စာအုပ်ကို Scan ဖတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ PDF အမှန်ဖြစ်လို့ ဖတ်ရတာ ရှင်းလင်းသေသပ်ပါတယ်.. မူရင်း တင်ပေးသူ ချယ်ရီသစ္စာ ကတော့ လင့်သေသွားပါပြီ..
မွနျမာဝတ်ထုဖတျခငျြလို့ တောငျးဆိုတဲ့မိတျဆှအေတှကျ ဆရာဒဂုံရှမြှေားရဲ့ လူသဈပငျ ဆိုတဲ့ ဝတ်ထုစာအုပျကို တငျပေးလိုကျပါတယျ.. စာအုပျကို Scan ဖတျထားတာမဟုတျဘဲ PDF အမှနျဖွဈလို့ ဖတျရတာ ရှငျးလငျးသသေပျပါတယျ.. မူရငျး တငျပေးသူ ခယျြရီသစ်စာ ကတော့ လငျ့သသှေားပါပွီ..
လူသစ်ပင် ( ဒဂုံရွှေမျှား ) ဝတ္ထု .pdf : 1.69 Mb
အခြား ဝတ္ထုများ Download Links
လင်းလက်လွန်း at 9:44:00 AM 0
နင်ပို့လာမဲ့ Message လေးကို
Maung Pauk at 2:00:00 AM 0
လင်းလက်လွန်း at 1:12:00 AM 0
ကျွန်တော်ငေးကြည့်တာ သူ့ မျက်နှာလေး
လင်းလက်လွန်း at 10:46:00 PM 0
Khant Phyo Win at 10:37:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:19:00 PM 0
လင်းလက်လွန်း at 7:51:00 PM 0
Khant Phyo Win at 4:20:00 PM 0
Khant Phyo Win at 4:15:00 PM 0
Maung Pauk at 8:58:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:22:00 PM 0
သူ ကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် သူများတွေချစ်တယ်ပြောတိုင်း ရင်မခုန်တတ်တော့တဲ့အရွယ်မှာ
Khant Phyo Win at 8:17:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:12:00 PM 0
Android Tool Huawei Phone Application Root Tools
Maung Pauk at 7:55:00 PM 0
Huawei y330-C00 တွေကို Root ဖို့ Bootloader Unlock Code တောင်းမရလို့ တိုင်ပတ်နေသူတွေအတွက် Huawei y330-C00 Insecure Boot ဖြစ်ပါတယ်.. Ko Myo ဆီက ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်.. လုပ်နည်းကတော့ Fastboot Mode နဲ့ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ပြီး fastboot flash boot image.img လို့ Command ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Huawei y330-C00 Insecure Boot : 7.6 Mb
DevHost Download Links
Maung Pauk at 5:50:00 PM 0
Thiha Htike at 12:53:00 PM 0
ကျွန်တာ့်ရဲ့ ကိုပေါက်မှာ တင်တဲ့ပထမဆုံးပို့စ်မှာ ဘာတင်ရမှန်းမသိတာနဲ့ လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ စာပေလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မနာလိုစိတ်ဟူသော မကောင်းစိတ်၊ အနုပ်စိတ်၊ အညံစိတ်၊ အကုသိုလ်စိတ်တို့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကျိုးမပြု။ တစ်ဖက်သားမှာလည်း ကိုယ့်မနာလိုမှုကြောင့် အကျိုးမမဲ့စေဘဲ ကိုယ်သာ အကျိုးမဲ့စေ၏။ ကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ကို ပြန်နှိပ်စက်နေ၏။ သည်အောက်တန်းကျသည့်စိတ်သည် လူညံများထံတွင် အများအပြားသိုလှောင်သိမ်းဆည်း ကိန်းအောင်းနေ၏။
Credit to http://itgroupmyanmar.com/
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ကို Message နဲ့ပို့ပြီးမမေးဖို့ အထူးပြောလိုပါတယ် .ဖုန်းဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (only voice call & Email )အမှန်တစ်ကယ်ပြောရရင် ပြန်ပို့ဖို့ပိုက်ပိုက်မရှိလို့ပါခင်ဗျာ :P
Khant Phyo Win at 9:04:00 PM 0
Min Oaker at 7:51:00 PM 0
Min Oaker at 7:48:00 PM 0
သင့်ရဲ့ password ကို Hacker တွေ ဘယ်လိုရယူနိုင်သလဲ? ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ?
(ပုံကို ကြည့်ပါ)
Khant Phyo Win at 1:25:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:56:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:26:00 PM 0
Anonymous at 2:28:00 AM 0
Download auto root Tool or Download auto root Tool
Maung Pauk at 12:21:00 PM 1
Khant Phyo Win at 2:34:00 PM 0
ငါ့ဘဝထဲမှာ "နင်" ဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးရှိရုံနဲ့ပြည့်စုံပါ
ငါ နင့် ကိုတွေ့ချင်တိုင်း....
IMED, MEID မပျက်ပေမယ့် *#06# နဲ့ခေါ်မရတဲ့ဖုန်းတွေကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ IMEI, MEID ကို Note Pad ပေါ်စေမယ့် MEID Getter Tool
Maung Pauk at 12:43:00 PM 0
ကိုဖြိုးညီညီ ရေးတဲ့ Tool ဖြစ်ပါတယ်.. သူ့မူရင်းအတိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
2014 Huawei device တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာdumpsys iphonesubinfo နဲ့ IMEI သို.မဟုတ် MEID ကြည့်လို. မရတာတွေ ရှိပါတယ် အဲ့လို ကြည့်ရင် IMEI =0 လို. ပြနေပေမယ့်
TelephonyManager class ကနေ getDeviceId() Method ကို လှမ်းခေါ်ရင်တော့
MEID က အမှန်အတိုင်းထုတ်ပေးနေသေးတာကို တွေ.ရပါတယ် အာ.နဲ့ ကျနော်လည်း sdcard ပေါ်မှာ writedown လုပ်ပီး PC ပေါ် ဆွဲတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို. လိုနေတဲ့ IMEI သို့မဟုတ် MEID ထွက်လာပါတော.တယ်
ဟုတ်ကဲ့ Bootloader unlock code generate လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သူက အသက်လောက် အရေးပါနေပါတယ် လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့ ပုံစံက *#06# ကိုခေါ် ပီး လက်နဲ့ပဲ Witedown လုပ်ရပါတယ်
အလွန်ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို. ကျနော် မြင်မိပါတယ် ခုပုံစံက apk ကို install လုပ် package Manager ကို Pc ကနေ လှမ်းနှိုး.. Activity ထလာပီ ဆိုတာနဲ့ MEID.txt ကို sdcard ပေါ်မှာ SAVE ပေးပါလိမ်မယ်
process ပီးပီဆိုမှ PM ကနေ force stop လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် နောက်ဆုံးအဆင်.ကတော. adb pull /sdcard/MEID.txt ပေါ.ဗျာ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို. လိုနေတဲ့ MEID ကို text file အနေနဲ့ သိမ်းပီးသားလေး Working Folder ပေါ် ရောက်လာပါပီ ခင်ဗျား လုပ်ချင်ရာ လုပ်ပေတော. ပေါ.ဗျာ
လူအနည်းစုပဲကြိုက်နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် Service Tool ကောင်းကောင်းလေးတွေ ထွက်လာဖို. ခြေတစ်လှမ်းရှေ.ရောက်လာပါပီ Phone ချိတ်ပီး bootloader unlock code request button လေး နိူပ်ပေးယုံပါပဲ
( ကိုဖွိုးညီညီ ရေးတဲ့ Tool ဖွဈပါတယျ.. သူ့မူရငျးအတိုငျး တငျပေးလိုကျပါတယျ..
2014 Huawei device တဈခြို့ဖုနျးတှမှောdumpsys iphonesubinfo နဲ့ IMEI သို.မဟုတျ MEID ကွညျ့လို. မရတာတှေ ရှိပါတယျ အဲ့လို ကွညျ့ရငျ IMEI =0 လို. ပွနပေမေယျ့
TelephonyManager class ကနေ getDeviceId() Method ကို လှမျးချေါရငျတော့
MEID က အမှနျအတိုငျးထုတျပေးနသေေးတာကို တှေ.ရပါတယျ အာ.နဲ့ ကနြျောလညျး sdcard ပျေါမှာ writedown လုပျပီး PC ပျေါ ဆှဲတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ကနြျောတို. လိုနတေဲ့ IMEI သို့မဟုတျ MEID ထှကျလာပါတော.တယျ
ဟုတျကဲ့ Bootloader unlock code generate လုပျတဲ့ နရောမှာ သူက အသကျလောကျ အရေးပါနပေါတယျ လကျရှိလုပျနရေတဲ့ ပုံစံက *#06# ကိုချေါ ပီး လကျနဲ့ပဲ Witedown လုပျရပါတယျ
အလှနျပငျြးစရာကောငျးတယျလို. ကနြျော မွငျမိပါတယျ ခုပုံစံက apk ကို install လုပျ package Manager ကို Pc ကနေ လှမျးနှိုး.. Activity ထလာပီ ဆိုတာနဲ့ MEID.txt ကို sdcard ပျေါမှာ SAVE ပေးပါလိမျမယျ
process ပီးပီဆိုမှ PM ကနေ force stop လုပျပေးလိုကျပါတယျ နောကျဆုံးအဆငျ.ကတော. adb pull /sdcard/MEID.txt ပေါ.ဗြာ ဒါဆိုရငျ ကနြျောတို. လိုနတေဲ့ MEID ကို text file အနနေဲ့ သိမျးပီးသားလေး Working Folder ပျေါ ရောကျလာပါပီ ခငျဗြား လုပျခငျြရာ လုပျပတေော. ပေါ.ဗြာ
လူအနညျးစုပဲကွိုကျနှဈသကျကွပါလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ Service Tool ကောငျးကောငျးလေးတှေ ထှကျလာဖို. ခွတေဈလှမျးရှေ.ရောကျလာပါပီ Phone ခြိတျပီး bootloader unlock code request button လေး နိူပျပေးယုံပါပဲ )
MEID Getter.zip : 1.19 Mb
Khant Phyo Win at 3:54:00 PM 0
Maung Pauk at 7:26:00 PM 0
Khant Phyo Win at 11:45:00 AM 0
Maung Pauk at 3:02:00 PM 0
Maung Pauk at 5:16:00 PM 0
Huawei ရဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ လင့်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ မြန်မာ Region အတွက် Firmware ပါ..
C8816 Firmware (V100R001C541B172,Burma,general Android 4.3,EMUI 1.6,05012DLA)
C8816 Firmware ( B172,Burma ) Myanmar Region : 708.46 Mb
MpFirmware Download Links
Maung Pauk at 4:58:00 PM 3
P6-U06 firmware (V100R001C00B119,Burma,Android 4.2,Emtion UI,05011TBU)
P6-U06 firmware ( B119, Burma ) Myanmar Region : 1.01 Gb
Mp Firmware Download Links
Huawei Website အညွှန်း
Huawei က မြန်မာ user များအတွက်သီး Page ကို consumer.huawei.com တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထည့်သွင်း
Maung Pauk at 2:46:00 PM 0
မြန်မာပြည်၏ ဈေးကွက်ကိုရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးရယူထားသည့် Huawei က မြန်မာပြည်အတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော Page တစ်ခုက ကို ၎င်း၏ တရားဝင် Website ဖြစ်သည့် consumer.huawei.com တွင် လွှတ်တင်လိုက်သည်။ ထိုစာမျက်နှာတွင် Huawei ၏ထုတ်ကုန်များကို မြန်မာဘာသာ ( Zawgyi Font ) ဖြင့် ဖေါ်ပြထားပြီး မြန်မာပြည်အတွက် သီးသန့် Firmware များကိုလည်း ရယူနိုင်သည်။ လိပ်စာမှာ http://consumer.huawei.com/mm/ ဖြစ်ပါသည်။
Maung Pauk at 4:02:00 PM 0
Vroot မပေါက်တဲ့ Huawei G6-U00 B194 အတွတ် Inscure Bootံလိုချင်သူတွေ ဒေါင်းသွားလိုက်ကြပါ။ Huawei G6-U00 B194 အတွတ် Inscure Boot တစ်ခုလုပ်ထားတာတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျို့..အသုံးပြုပုံ
ကတော့ Huawei BootLoaderUnlock ဆိုဒ်မှာကုဒ်တောင်းပြီး Huawei BootLoaderUnlock လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဖုန်းကို Fastboot mode ၀င်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်.. ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုဖြေချ ဖိုင်ကို
ဖွင့် ကီးဘုတ်မှ Shift ကီးကိုနှိပ်ပြီး Right Click ထောက် Open Command window here ကိုနှိပ် ပေါ် လာတဲ့ cmd box မှာ fastboot flash boot boot.img လို့၇ိုက်ပြီး Enter ခေါက်.. ပြီးရင် ဖုန်းကို Vroot နဲ့ ပြန်ဖောက်ကြည့်ပါ Root ဖောက်လို့ အောင်မြင်တာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်.
Huawei G6-U00 B194 Inscure Boot : 7.33 Mb
Website ပေါ်တွေကို နေ့တိုင်းတက်ကြည့်နေသူ
အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် .exe လေးတစ်ခုကို
တင်ပေးချင်ပါတယ်... PDF24 Creator လို့
ခေါ်ပါတယ် သိပြီးသားသူတွေ လည်း ရှိသလို
Website ပေါ်တက်ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့
Post တွေကို သိမ်းထားတတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
အဆင်ပြေစေမယ့် .exe(PC software)လေးတစ်ခုပါ
အသုံးပြုပုံလေးကတော့ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ post ရဲ့
wibsite ကိုသွား ပြီးရင် Ctrl+P ကိုနှိပ် ကျလာတဲ့ box
မှာ Pdf24pdf ကိုရွေး ပြီးရင် Ok Ok ပြီးရင် Saှve as
မှာ ကိုယ့် post တွေကို နေရာကိုရွေး
ပြီးရင် Ok ..PDf ပြောင်းပြီးသွားရင်တော့ ပြီးပါပြီ
Min Oaker at 6:36:00 PM 0
Facebook အကောင့် Lock
ညီအကို တွေအတွက် ကျွန်တော်
Facebook account ကို lock မကျ
စေရဘဲ outlook apk နဲ့ ဖွင့်မယ့်
ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတော့ Ko Zawtwin
အောက်ကလင့် ကနေ outlook apk နဲ့
Download Outlook apk : (6.5) MB
Download Book : (4) MB
Khant Phyo Win at 8:32:00 PM 0
ည က လ မင်းကြီးမသာပါဘူး
၇င် ထဲ အလွမ်းတွေလည်း
Khant Phyo Win at 2:46:00 PM 0
Maung Pauk at 9:05:00 PM 0
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက မိုဘိုင်းဖုန်း ကွန်ရက်စက်ပစ္စည်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့အထိဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ရက် စက်ပစ္စည်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို (၆-၁၂-၂၀၁၄)၊(၉ -၁၂-၂၀၁၄)၊ (၁၁ -၁၂-၂၀၁၄) နှင့် (၁၂-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့ တို့တွင် မန္တလေးအနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ (၁၂ -၁၂- ၂၀၁၄) နှင့် (၁၆-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့ တို့တွင် မကွေးအနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ (၁၈-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့ တွင် မုံရွာအနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ (၁၉-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားအနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ တွင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
(၂၃-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် လားရှိုးအနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ (၂၃ -၁၂-၂၀၁၄) နှင့် (၂၅-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့ တို့တွင် မိတ္ထီလာအနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ၊ (၂၆-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့ တွင် ပခုက္ကူ နှင့် မူဆယ်အနီး ဝန်းကျင်ဒေသများ တွင် ည (၁၂)နာရီ အချိန်၌ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် အချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှုများ ယာယီပြတ်တောက်နိုင်ပြီး ပြတ်တောက်နိုင်သော အချိန်ကာလမှာ ခန့်မှန်းခြေ (၂၀)မိနစ် ခန့်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ကြေညာသည်။